चर्चित टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको भयो डिभोर्स, लाइभमा आएर पूर्वपति विवेकले किन यस्तो भने? हेर्नुहोस् भिडियो – Sandesh Press
August 23, 2021 424
काठमाडाैं । चर्चित टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको वैवाहिक सम्वन्ध टुटेको छ । धेरै दिनदेखि उनको डिभोर्सको चर्चा टिकटकमा व्यापक थियो, तर उनले आधिकारिक रुपमा केही बताएकी थिइनन् ।
Prevटिकटक स्टार स्मारिका ढकालको डिभोर्स
Nextराजयोग लिएर जन्मेका हुन्छन् यी ४ राशि, धेरै छिटो हासिल गर्दछन् सफलता !
ललितपुर मा घट्यो सोच्नै नसकिने घ टना : कामदारको अङ्ग टु क्रा टु क्रा, घ टना स्थल निकै भयावह…भिडियो रिपोर्टिङ सहित
विष्णु वरालको मृत्यु प्रकरण : विवाहमा दिएको सुन नक्कली हो कि सक्कली भन्दै जाँच्न पुगे सुन पसलमा , भेटियो यस्तो प्रमाण (हेर्नुस् भिडियो)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी
‘खुसी नै सकिएपछी पैसाको के काम’ भन्दै नागा संग २ सय करोड नलिने सामन्थाको निर्णय,